သွေးကင်ဆာလက်တွေ့ပျောက်ဆေး ...! - APANNPYAY
Home / ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ / ဗဟုသုတအစုံ / သွေးကင်ဆာလက်တွေ့ပျောက်ဆေး ...!
Apann Pyay 7:15 PM ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ , ဗဟုသုတအစုံ Edit
သွေးကင်ဆာဖြစ်တဲ့သူဟာ အမျိုးသားဖြစ်လျှင် အမျိုးသမီးခလေးငယ်စို့တဲ့ မိခင်နို့ရည်ကို တနေ့ အခါးပန်းကန်တစ်လုံးနေ့စဉ်သောက်သုံးပေးရပါမယ်။ရောဂါရှင်ဟာ အမျိုးသမီးဖြစ်လျှင် အမျိုးသားခလေးငယ်စို့တဲ့ မိခင်နို့ရည်ကိုအထက်ပါအတိုင်သောက်သုံးပေးရပါမယ်။တစ်လနီးပါးခန့်သောက်
သုံးပေးပါက သိသိသာသာ သက်သာ ပျောက်ကင်းပါသည်။
ပုံမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ ကင်းခြေများအကောင်ကို သီးသန့်ဖြစ်စေ၊ အသီးအနှံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြင့်
ဖြစ်စေ အစိမ်းကြော်'ကြော်စား၍ဖြစ်စေ ရက်ပေါင်း(၃၀)ခန့်အတွင်း သိသိသာသာ
ငွေကုန်သက်သာစေမယ့် ဆေးနည်းလေးမို့ အထက်ပါဆေးနည်း(၂)မျိုးစလုံးကြိုက်နှစ်
သက်ရာ ပြုလုပ်သုံးစွဲနိုင်စေရန် စေတနာ ဖြင့်ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Credit: Myawady Health
သှေးကငျဆာဖွဈတဲ့သူဟာ အမြိုးသားဖွဈလြှငျ အမြိုးသမီးခလေးငယျစို့တဲ့ မိခငျနို့ရညျကို တနေ့ အခါးပနျးကနျတဈလုံးနစေ့ဉျသောကျသုံးပေးရပါမယျ။ရောဂါရှငျဟာ အမြိုးသမီးဖွဈလြှငျ အမြိုးသားခလေးငယျစို့ တဲ့မိခငျနို့ရညျကို အထကျပါအတိုငျသောကျသုံးပေးရပါမယျ။တဈလနီးပါးခနျ့သောကျသုံးပေးပါက သိသိသာသာ သကျသာ ပြောကျကငျးပါသညျ။
ပုံမှာမွငျတှရေ့တဲ့ ကငျးခွမြေားအကောငျကို သီးသနျ့ဖွဈစေ၊ အသီးအနှံ ဟငျးသီး
ဟငျးရှကျမြားဖွငျ့ဖွဈစေ အစိမျးကွျော'ကွျောစား၍ဖွဈစေ ရကျပေါငျး(၃၀)ခနျ့အ
တှငျး သိသိသာသာ သကျသာပြောကျကငျးကွောငျးတှရေမညျ။
ငှကေုနျသကျသာစမေယျ့ ဆေးနညျးလေးမို့ အထကျပါဆေးနညျး(၂)မြိုးစလုံးကွိုကျနှဈ
သကျရာ ပွုလုပျသုံးစှဲနိုငျစရေနျ စတေနာ ဖွငျ့ဖွနျ့ဝပေေးလိုကျပါတယျ။